हिन्दुत्वप्रति केही मानिसहरुको दृष्टिकोण धर्मशास्त्रहरुको अध्ययनबाट होईन कि, समाजमा विद्यमान कर्मकाण्डी व्यवहार र अन्धविश्वासको जगमा निर्माण भएको देखिन्छ । अरुले सुनाएका कुराहरुलाई अन्तिम सत्य मानेर त्यसकै पछाडि कुद्ने तर आफैँ अध्ययन गरेर वास्तविकता पत्ता नलगाउने रोग पनि हाम्रा केही कथित् भौतिकवादी कलमजीवीहरु माझ आज भोलि संक्रमण झैं फैलिएको छ ।
हिन्दुत्व, नेपालको राष्ट्रिय झण्डा तथा गाईको सवालमा जे जस्ता तर्कहरु पेश गरिएका छन्, ती आफैँ एउटा स्वस्थ, प्रगतिशील तथा भाईचारा युक्त समाज निर्माणका लागि अवरोध जस्ता बनेका छन् । किनभने आजको पृथ्वीमा रहेका हरेक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक दर्शनहरुको जग नै हिन्दुत्व हो । भौतिकवादी सिद्धान्तको पहिलो प्रणेता पनि हिन्दु समाज नै हो । गणतन्त्रको अभ्यास पनि हिन्दु समाजले हजारौँ वर्ष अगाडि गरिसकेको थियो । संघीयताको अभ्यास पनि भईसकेको थियो, भलै आजको दिनमा संघीय राज्यको अवधारणा पश्चिमा चिन्तनमा आधारित छ । र, यो सत्य हो नेपालको झण्डा धार्मिक प्रतिकको रुपमा रहेको छ । यसले वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनहरुलाई बोकेको छैन । नेपालका ९५ प्रतिशत सनातन धर्मावलम्बीहरुको धार्मिक आस्थालाई बोकेको छ । धार्मिक आस्था राजनीतिक व्यवस्था जस्तो हरेक दश वर्ष वा पाँच वर्षमा बदलिने कुरो होईन । झण्डाले राजनीतिक बद्लावहरुलाई मात्रै प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ भन्ने विचार समाजले ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने छैन । नेपाली समाज द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विचारबाट प्रभावित र प्रेरित समाज होईन; पूर्णतः धार्मिक समाज हो ।
नेपालका किराँतहरुलाई महागुरु फाल्गुनानन्दले सुर्यवंशी भनेका छन् । भगवान बुद्ध पनि सुर्यवंशी नै हुन् । यी दुबै धार्मिक समुदायभित्र सूर्य र चन्द्रमाको उपासना गरिन्छ जसरी हिन्दु समाजले सुर्य र चन्द्रमाको उपासना गर्दछ । र, न त महागुरु फाल्गुनानन्दले न त भगवान बुद्धले र न त हिन्दु धर्मशास्त्रहरुले नै जीवहत्याको अनुमति दिएका छन् । गाई मात्रै होईन, सबै प्रकारका जीवहरुको हत्या सनातन धर्मको मूल्यमान्यता विपरित रहेको छ । यहाँनेर सनातन धर्मको अर्थ हिन्दु मात्रै होईन, किरात, बौद्ध, जैन, बोन, शीख पनि हो ।
सूर्य, चन्द्रमा अनि रातो रंगलाई केवल हिन्दुत्वसँग मात्रै जोडेर हेरिएको छ । तर, विश्वको धार्मिक ईतिहासले भिन्दै कुरा बोलेको छ । ईसाई र ईस्लाम पन्थको उदय र अन्य धर्ममाथि अतिक्रमण अघि दुनियाँमा सबैतीर सूर्य र चन्द्रमालाई देवताको रुपमा पुज्ने गरेको पाईन्छ । मिश्रिहरु, चिनियाँहरु, रोमनहरु, अफ्रिकनहरु आदि सबैको तत्कालीन धार्मिक अभ्यासले सूर्य र चन्द्रमाको अनेक प्रकारले उपासना गर्ने गरेको देखिन्छ । जब दुनियाँमा साम, दाम, दण्ड र भेदको नीति अपनाएर ईसाई र ईस्लाम पन्थको अतिक्रमण सुरु भयो तबदेखि सुर्य र चन्द्रमाप्रतिको आस्था एसियाको भूगोलभित्र भारत, नेपाल, चीन आदि मुलुकहरुमा खुम्चिन पुग्यो । सूर्य शक्तिको प्रतीक हो । चन्द्रमा ज्ञानको । सूर्य उष्णताको प्रतीक हो । चन्द्रमा शितलताको । रातो रंग विजयको प्रतीक हो । भिक्षुहरुका चीवर पनि रातो रंगका नै हुन्छन् ।
सूर्य, चन्द्रमा, रातो रंग आदि एकदमै गहन अर्थ बोकेका शब्दहरु हुन् । यिनीहरुको भौतिक, आध्यात्मिक व्याख्याको गहिराईलाई एउटा लेखमा नाप्न सम्भव छैन् । त्यसकारण, यस्ता ब्रह्माण्डिय पदार्थहरुलाई यदि नेपालको झण्डाले प्रतिबिम्वित गर्दछ भने यसमा आपत्ति जनाउनु पर्ने किन ? त्रिकोणात्मक झण्डालाई चतुर्भुजाकार बनाउँदैमा, झण्डाबाट चन्द्र, सूर्य र रातो रंग हटाउँदैमा समस्या समाधान भईहाल्ने हो ? समाजको वास्तविक समस्या आर्थिक समुन्नति हो; झण्डा होईन । राष्ट्रिय झण्डाले अन्य जाति समुदायको अपमान ग¥यो; यसलाई बदलौँ भन्दै झण्डा बदलेर समाजमा व्याप्त आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य समस्याहरु निर्मुल भईजाने होईनन् । यस्ता अनावश्यक बहस कै कारण समाज जबरजस्ती तरंगित भईरहेको छ; नयाँ द्वन्द्वको बिजारोपण हुन खोज्दैछ । आप्mना असफलताहरुलाई हिन्दुत्व, राष्ट्रिय झण्डा र गाईसँग लगेर जोड्नु कस्तो खालको माक्र्सवादी चिन्तन हो ? अनि, के बहुसंख्यकहरुको आस्थामाथि प्रहार गर्दै अल्पसंख्यकहरुलाई वैचारिक रुपले उत्तेजित पार्ने काम भौतिकवादी दर्शन अनुसार समावेशी समाज निर्माणको पहल हो ?
नेपालका कथित् माक्र्सवादी विचार समूहहरु हिन्दुत्व, राष्ट्रिय झण्डा र गाईको विषयमा नकारात्मक टिकाटिप्पणी गरेर जति सञ्चारमाध्यमहरु रंगाई रहेका छन्, त्यति समाजको आर्थिक, भौतिक विकास तथा सकारात्मक चिन्तन शैली निर्माणका लागि किन सक्रिय हुन नसकेका ? के सधैँ भरी बिगार्ने काममा मात्रै दक्षता प्रदर्शन गर्ने ? अरुको आस्था चाहिँ माक्र्सवादीहरुका लागि आस्था देखिने, हिन्दुको आस्था चाहिँ पाखण्ड र सामाजिक विभेदको रुपमा देखा पर्ने ? कस्तो खालको माओवादी स्कुलिङ हो यो ? आश्चर्य लाग्छ, यी जो कहिले पनि मुलुकका धरोहरहरुको सम्मानप्रति संवेदनशील बन्न सकेनन्; मुलुकको विश्वव्यापी परिचय उसको इतिहास, उसको मौलिकता र उसको धार्मिक परम्पराले धानेको हुन्छ भन्ने सामान्य चेतसम्म पाल्न सक्दैनन्; हिजोआज अचानक धर्मसम्बन्धी विषयमा कलम चलाई रहेका छन् । अझ गजब त यिनीहरुको चिन्तन शैली छ । सधैँ भर यिनीहरु हिन्दुत्वलाई एउटा सामन्ती धर्मको रुपमा व्याख्या गर्न रुचाउँछन् अनि ईसाईलाई चाहिँ क्रान्तिकारी पन्थको रुपमा । यसैकारण, नेपाली समाजमा चलिरहेको धर्म परिवर्तनको व्यापारप्रति यिनीहरु नम्र देखिन्छन् । यिनीहरु सधैँभरी आप्mना तर्कहरुलाई बलियो पार्न तथा लेखहरुको प्रामाणिकता पुष्टि गर्नका लागि युरोप वा अमेरिकाका विद्वानहरुका तर्कको अत्यधिक सहारा लिईरहेका देखिन्छन् । जसको स्कुलिङ र चिन्तन शैली नै पश्चिमा शैलीबाट प्रभावित छ, तिनीहरुबाट हामीले हाम्रो मौलिकता सुरक्षित रहने आश गर्नु विद्वता कि मुर्खता ? आप्नो मौलिकतालाई चिन्न नसकेर हरेक कामकुराका लागि विदेशीको पुच्छर बनेकै कारण आज मुलुक ६ खर्बको ऋणले थिचिएको छ ।
ऋग्वेदमा गोमांश भक्षण गर्ने गरिएको तथा गोहत्या गर्ने गरिएको कुरो पनि यतिखेर केहि कलमजीवीहरुले उठाएका छन् । मलाई थाहा छैन, उनीहरुले कसले भाष्य गरेको ऋग्वेद अध्ययन गरे । वा आफुले ऋग्वेद अध्ययन नगरी अरु कसैले सुनाएको कथनमाथि आँखा चिम्लेर विश्वास गरिदिए । केहि व्यक्ति तथा समुहले स्वार्थवस् वैदिक शब्दहरुको गलत अर्थ लगाउने गरेको पाईन्छ । यस्तो गलत भाष्य गर्ने परम्पराको सुरुवात म्याक्समुलरले गरेका थिए । अहिले भारतमा रहेको एक जना ईसाई आचार्य विकास मसीह म्याक्समुलरको त्यस परम्पराको बिँडो थामेर आप्mनो पेट पालिरहेका छन् । वैदिक शब्दहरुको केवल एउटा मात्रै अर्थ निकाल्ने अभ्यास आफैँमा गलत छ । किनभने वेदभित्र त्यस्ता धेरै शब्द छन् जसका पच्चीस भन्दा बढी अर्थ निस्किन्छन् । त्यस्तो बहुअर्थी एउटा शब्द गो पनि हो । वेदमा गो को अर्थ गाई मात्रै रहेको छैन् । सुर्य, पृथ्वी, अन्तरिक्ष, ईन्द्रिय, आमा, स्वर्ग आदिको निम्ति पनि गो शब्दलाई प्रयोग गरिएको छ । यसैगरी, मेध शब्द छ ।
यसका पनि विविध अर्थ छन्–पवित्र राख्नु, वृध्दि गर्नु, मिलाउनु, हत्या गर्नु आदि । वेदमा, यसैगरी, ईन्द्र शब्द रहेको छ । यसले पानी पार्ने देवता, ईश्वर, सेनापति, राजा, विद्वान आदि अर्थ दिएको छ । ऋग्वेदको दशौँ मण्डलका केहि शुक्तका केही मन्त्रहरुमा ईन्द्रले गोरुको मासु खाएको, पशुहरुको बली दिएको तथा गाईको हत्या गर्ने गरेको उल्लेख छ भनिन्छ । मैले माथि नै भनि सकेँ यस्तो प्रचार स्वार्थवस् गरिएको हो र यसको सुरुवात म्यासमुलरले गरेका थिए । अहिले नेपालमा केहि ईसाईहरु पनि वेदमा गोहत्या, गोमांश भक्षण, पशुबली तथा नर वलीको उल्लेख रहेको हवा पिटिरहेका छन् । यसभित्र सनातन धर्मावलम्बीहरुलाई उनीहरुकै शास्त्रप्रति अनाशक्त बनाएर इसाई पन्थप्रति आकर्षित गर्ने रणनीति लुकेको छ । अर्काेतर्फ, बाईबलमा नरबली, पशुबली आदिको व्यवस्था रहेको कारण उनीहरु वेदलाई पनि सोही तुल्य देखाउन चाहन्छन् ।
अन्त्यमा, जुन समाजमा ईसाईलाई सहज प्रवेश दिईन्छ तथा निर्वाध रुपमा धर्मप्रचार गर्ने सुविधा उपलब्ध गराईन्छ, त्यो समाज दिर्घकालीन रुपमा कलहको दलदलमा फस्न पुग्छ । यसको ताजा उदाहरण नेपाल बनीसकेको छ । उनीहरु मुखौटो फालेर वास्तविक कृत्यमा ओर्लिईसकेका छन् । यसअघि सन् २०१२ मा सुडान टुक्रियो । कारण थियो, ईसाई र ईस्लामबिचको धार्मिक कलह । पूर्वाेत्तर भारतका ईसाई प्रभाव रहेका प्रदेशहरुमा अलग राष्ट्रको माग गर्ने ईसाई सशस्त्र समूहहरु सक्रिय छन् ।
प्रकाशित २५ चैत्र २0७४ , आइतबार | 2018-04-08 01:02:51